गलत मान्छेको हालीमुहाली हुन दिन्न – चन्द - Khelpati
शनिवार, आश्विन ११, २०७६ निशान राई
चतुरबहादुर चन्द । फाेटाे : खेलपाटी
सुदुरपश्चिमको कांग्रेस राजनीतिमा चतुरबहादुर चन्द चिनिएको नाम हुन् । शिक्षण पेशामा आबद्व भएपनि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशिल रहे । जब शिक्षण पेशाबाट अवकास पाए, सिधै बैतडीको जिल्ला उप सभापतिमा नियुक्त भए । सुदुरपश्चिम क्षेत्र कांग्रेसमा संस्थापन नामका लागि चिनिन्छ, तर उनी कोईराला परिवारको विशेष मान्छे हुन् । उनी सुदुरपश्चिममा जिपी कोईराला फाउण्डेशनको नेतृत्व गर्छन् ।
राजनीतिमा जस्तै उनले क्रिकेटमा समेत नाम बनाए । विनयराज पाण्डे नेतृत्वको क्यानको उपाध्यक्ष रहि सकेका चन्द क्यानको निर्वाचनबाट अध्यक्ष समेत चुनिए । तर निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै आईसीसीले उनको नेतृत्वको क्यानलाई निलम्बन गरिदियो ।
आईसीसीले निलम्बन गरेर के भो त, उनी निरन्तर क्रिकेट राजनीतिमा सक्रिए रहे । निर्वाचित भईसकेपछि उनले प्रत्येक जिल्लासंग सम्पर्क बढाए, सम्बन्ध बनाए । जब क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन सुरु भयो, चन्दले आफ्ना समुहका धेरै प्रतिनिधि केन्द्रिय निर्वाचनमा छनोट गराउन सफल रहे ।
त्यसैले निर्वाचनको संघारमा उनी बलिया देखिएका छन् । विपक्षी टिम समेत चन्दको पछाडी भिड रहेको तथ्य स्विकार्छ । के त्यो भिड मतमा बदलिएला ? चन्दको चासो र चिन्ता यसैमा छ ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन खेलपाटीका समाचार प्रमुख निशान राईले क्यान निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अध्यक्षका प्रत्यासी चतुरबहादुर चन्दसंग कुराकानी गरेका छन् ।
अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । कत्तिको चुनाव लागेको छ ?
प्रतिनिधि साथीहरु आउन सुरु भइसक्यो । भेटघाट सुरु भएको छ ।
जित्नेमा कत्तिको आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ ?
आत्मविश्वास सय प्रतिशत छ । सय प्रतिशतनै साथीहरुले जिताउनुहुन्छ ।
भिड र अंक गणितमा तपाईलाई बलियो मानेका छन् । आफ्नो मुल्याङ्गकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
गणित त जोडेको छैन । तर जिल्लाका साथीले माया गरेका छन् । जिल्लाको प्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्ने इच्छा हो । ३९ वटै जिल्लाका साथीले मलाई चिनेका छन् । त्यसैले माया गर्ने बित्तिकै गणित आफै बलियो हुन्छ ।
उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एजेण्डा के छन् ?
सबैको साझा एजेन्डा क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्ने हो । सबै काम आईसीसीको रोडम्याप अनुसार भईरहेको छ ।
निर्वाचन शान्तिपुर्ण र निष्पक्ष भएको रिपोर्ट पुगेपछि आईसीसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने सन्देश दिएका छ । निलम्बन फुकुवा गरेर मात्र धेरै कुरा हुने हैन । नेपाली क्रिकेटमा निलम्बन नहुँदा पनि विवाद थियो । अलि अलि बेथिती रहेको हल्ला थियो ।
चर्चा धेरै भएपनि प्रशासन, वित्तिय व्यवस्थापन र पारदर्शीतामा कुनै न कुनै समस्या थियो । सोही कारण आईसीसीले अनुदान रोकेको यिो । अब यसलाई चिर्नु छ ।
आइसीसीसँग सम्बन्ध बनाउने, विश्वासको वातावरण दिलाउने काम गरेर नेपाली क्रिकेटलाई पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्छु ।
किक्रेटमा आएको लगानीलाई किक्रेटमा नै प्रयोग गर्छु । खेर जान दिन्न । खेलाडीको स्तर उकास्न र किक्रेटको पूर्वाधार विकासदेखि अन्य सकारात्मक काममा मात्र खर्च गर्छाै भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
खराब आचरणका साथीको टिम बोकेर हिड्नु भएको छ भन्ने तपाइमाथि आरोप छ नि ?
टिम बनाउदा स्वभाविक रुपमा एउटै खालको र एउटै प्रवृतिको मान्छे हुँदैन । टिममा कस्तो मान्छे भन्दा पनि टिमले गर्ने निर्णय कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो ।
मेरो जस्तो व्यवहार र मेरो जस्तै आनीबानी भएका मान्छे टिममा नहोलान् । तर मैले गर्ने निर्णय क्रिकेटको पक्षमा, विकासमा हुनेछ ।
संक्रमणकालिन नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व विनयराज पाण्डेलाई दिएर अघि बढ्न तपाईलाई के समस्या ?
म निर्वाचित अध्यक्ष भइसकेपछि नैतिकताले अब उपाध्यक्ष बस्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन, बस्दिन । मसंग दुईटा मात्र विकल्प थियो । किक्रेट संघ छोडेर अन्यत्र जाने कि अध्यक्ष भएर काम गर्ने ।
रमेश सिलवाल अध्यक्ष भएपछि निलम्बित अवस्थाको क्यानलाई छाडेर म अर्को बाटो लाग्न पथ्र्यो । किन चार बर्ष यत्रो मेहनत गरेर क्रिकेटलाई सही बाटोमा ल्याउन मेहनत गरे ? किनकी मलाई काम गर्ने वातावरण दिईएन । सोही कारण यत्रो मेहनत गरेर आएको हुँ ।
उहाँको घरमा गएर तपाईको ‘गाईड लाइन’ बन्न तयार छु भनेर समेत प्रस्ताव गरे । तपाईको रोडम्याप अनुसार अगाडी बढ्न तयार छु भनेर प्रस्ताव गरे । तर उहाँले सोचौला भन्नुभयो । म अध्यक्ष भए किक्रेट सहीं बाटोमा जान्छ नत्र किक्रेट धरासायी हुन्छ भन्ने जुन भ्रम उहाँले पालिराख्नुभएको छ, त्यो मलाई चित्त बुझेको छैन ।
फरक दलको हुनुहुन्छ । क्रिकेट निलम्बनमा छ । राखेप सदस्य सचिवसंग आफ्नै टसल छ । निर्वाचित भएपछि क्रिकेट संघ अघि बढाउन कत्तिको गाह्रो देख्नुहुन्छ ?
गाह्रो छैन । सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने हो । योजना हामीले बनाउने हो । सरकारलाई लागनीका लागि सहमत गर्ने हो । क्रिकेट राम्रो भए देशको इज्जत बढ्छ । देशको नाम चम्किन्छ । क्रिकेट राम्रो भए सदस्य सचिवको मान सम्मान बढ्छ ।
जो आएपनि क्रिकेटलाई बन्धक बनाउने र बाधा गर्ने काम गर्नु हुदैन । किनकी हामीले एक पटक धोका खाईसक्यौ । कसैलाई लाग्ला, विचारधारको कारणले अन्तर कलह होला तर म समन्व्यकारी तरिकाले काम गर्छु ।
किक्रेट बुझेको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । मसँगै पाँच वर्ष उपाध्यक्ष भएर संगै काम गरेका छौ । उहाँले आफ्नो ठाउँबाट किक्रेटमा लगानी गर्नुभएको छ । किक्रेटमा काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने उहाँको इच्छा छ । सर्वाेच्च निकायमा भएपछि त अझै किक्रेटकालागि नै काम गर्नुहुन्छ । यो राम्रो अवसर हो ।
अन्तिममा चतुरबहादुर नेतृत्वमा आएपछि खराब मान्छेको हालीमुहाली हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
कसैको हालिमुहाली हुँदैन । टिमको हुन्छ, तर राम्रो कामका लागि हुन्छ ।
राखेप, क्रिकेटका अगुवा, विनयराज पाण्डे लगायत सबैको सहयोग लिएर जान्छु । गलत मान्छेको हालिमुहाली हुन दिन्न ।